Ibaraki စီရင်စုရှိအလုပ်ခွင်တွင်းအလုပ် - အကယ်၍ သင်သည်အလုပ်တစ်ခုရှာနေလျှင် [Genvers]
Ibaraki စီရင်စုရှိအလုပ်ခွင်တွင်း ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူမှုနှင့်အချိန်ပိုင်းအလုပ်အလုပ်များ
[စာရင်း ၈ ခု] Ibaraki စီရင်စုနယ်တွင်အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်းနှင့်အချိန်ပိုင်းအလုပ်ခေါ်ယူခြင်း။ဆောက်လုပ်ရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းများတွင်အဓိကထားသောအလုပ်အမျိုးမျိုးကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။သင်၏လက်၌အလုပ်တစ်ခုရပြီးသင်၏အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုကိုပြန်လည်လုပ်ဆောင်ပါ။Kato Equipment Industry Co. , Ltd. , Shinken Co. , Ltd. နှင့် Ibaraki စီရင်စုရှိအခြားကွင်းဆင်းအလုပ်များကိုတင်ထားသည်။
[Tsuchiura City] ဒေသတွင်းအမြစ်တွယ်နေသောပစ္စည်းကိရိယာကုမ္ပဏီ။
8 ကိစ္စIbaraki စီရင်စုတွင်အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ရှိသည်။ (၁-၃၀)
Kato Equipment Industry Co. , Ltd. မှအလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ဟုတ်လား
Hasegawa Shoji Co. , Ltd. ဂျော့ဘ်ဟုတ်လား
Joei Engineering Co. , Ltd. ၏အလုပ်များဟုတ်လား
Koei Reinforcement Co. , Ltd.
◆သင်အတွေ့အကြုံနည်းပါးသော်လည်းပင်ယန်း ၁၁၀၀၀ မှနေ့စဉ်လစာ◆သင်ချက်ချင်းအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ R 11,000R ဆောင်အပြီးအပြီးအပြည့်အ ၀ ဝင်ပါ◆ကုမ္ပဏီသို့ ၀ င်ရန်အတွက်ဂုဏ်ပြုသည့်ငွေလည်းရှိပါသည်။ ◆အပတ်စဉ်နှစ်ရက်စနစ်သည်လည်းကောင်းပါသည်◆မြို့ပြareaရိယာတစ်ခုလုံးရှိဆိုဒ်များစွာသည်။တိုက်ရိုက်ခုန် OK ကို
အားဖြည့်ဘား (လက်သမား / အလုပ်သင်)
(လက်သမား) နေ့စဉ်လစာယန်း ၁၂၀၀၀ မှ ၁၉၀၀၀ ယန်း (အတွေ့အကြုံမရှိသော) နေ့စဉ်လစာ ၁၁၀၀၀ ယန်း ~ * သင်တန်းကာလရရှိနိုင်
တိုကျို၊ အီဘရာကီ၊ ဆူတာမာ၊ ခီဘီစသည်တို့တိုကျို၏မြို့ပြSubရိယာ၏ဆင်ခြေဖုံးများ * တိုက်ရိုက်ပြန်လာပြီ
Koei Rebar Co. , Ltd. ဂျော့ဘ်ဟုတ်လား
MK Interior Co. , Ltd. အလုပ်များဟုတ်လား
multi ကျွမ်းကျင်သောလုပ်သားနှင့်အလုပ်သမားများကိုခန့်ထားခြင်း anything ဘာမှမလုပ်နိုင်သည့်“ စူပါလက်သမား” ဖြစ်လာရန်ရည်မှန်းထားပါလေ။
■ကျွမ်းကျင်သောလုပ်သား [စနစ်တည်ဆောက်ခြင်း၊ ပစ္စည်းကိရိယာ၊ လျှပ်စစ်၊ သစ်သားလက်သမား]
● (ကျွမ်းကျင်သူလုပ်သားအလုပ်သင်) နေ့စဉ်ထောက်ပံ့ကြေး - ယန်း ၁၀,၀၀၀ မှ ၂၅၀၀၀ ယန်း●● (လက်ရှိအလုပ်သမား) နေ့စဉ်ထောက်ပံ့ကြေးယန်း ၈၀၀၀ မှ ၁၅၀၀၀ ယန်း [လစဉ်ပျမ်းမျှ ၂၅၀၀၀၀ နှင့်အထက်] ●အနိမ့်ဆုံးလစာ ၁၈၀,၀၀၀ ယန်းအာမခံထားသည်။
[ရုံး] 1062-4 Nekozane, Bando City, Ibaraki စီရင်စု Ibaraki စီရင်စုတစ်လျှောက် - မြောက်ပိုင်း Chiba စီရင်စု
[အဆောင်အပြီးအစီး!ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများကိုကြိုဆိုပါတယ်] စီးပွားရေးတိုးချဲ့ခြင်းကြောင့်စက်မှုလုပ်ငန်းရှိအတွေ့အကြုံမရှိသူများအတွက်ပင်လစဉ်ဝင်ငွေမြင့်မားစွာစတင်သည်။တည်ငြိမ်သော ၀ င်ငွေရလိုသူများအတွက် "Sawada Construction" ကိုသွားပါ။အရည်အချင်းပြည့်မှီသောဝယ်ယူမှုအထောက်အပံ့လည်းရှိပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏မေတ္တာရပ်ခံချက်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်အတွေ့အကြုံမရှိသောအရည်အချင်းမပြည့်မှီသောလူများထံမှအလုပ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
①အမှိုက်ပုံ (၁၀ တန်) ယာဉ်မောင်း②မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း (လေးလံသောပစ္စည်းကိရိယာအော်ပရေတာ) civil သာမန်အရပ်ဘက်အင်ဂျင်နီယာလုပ်သား
driver အမှိုက်ပုံ (၁၀ တန်) ယာဉ်မောင်း [ကုမ္ပဏီ] လစဉ်လစာ ၂၅၀,၀၀၀ - ၄၅၀,၀၀၀ ယန်း * နေ့စဉ်လစာ ... ၁၂၀၀၀ - ၁၈၀၀၀ ယန်း! !! [က] နေ့စဉ်လစာ ၁၂၀၀၀ မှ ၁၈၀၀၀ ယန်း★ Kei ...
Chiba စီရင်စုရှိဆောက်လုပ်ရေးနေရာများ၊ အဓိကအားဖြင့် Ibaraki စီရင်စု (Tsukuba )ရိယာ) တွင်မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ ၀ န်ထမ်းနှင့်ယာဉ်မောင်းအဖြစ်သင်အလုပ်လုပ်ရမည်။ ★ Corona ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမရှိပါ။ ...
Sawada Construction Co. , Ltd မှအလုပ်အကိုင်ကမ်းလှမ်းမှုဟုတ်လား
မြေလုပ်ငန်း / အထွေထွေ (5)
ဆောက်လုပ်ရေးထရပ်ကား (dump truck) (3)
အခြားအကြီးစားစက်ကိရိယာများ (တူးဖော်စက်၊ အမ်ဘို၊ အရောအနှော) (2)
အမျိုးအစားဖြင့် Ibaraki စီရင်စုရှိအလုပ်များကိုချုံ့ပါ
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ / ဗိသုကာ (8)
အလုပ်သင် / အတွေ့အကြုံမရှိသောကြိုဆိုခြင်း (8)
လူမှုဖူလုံရေးအပြည့်အ ၀ တပ်ဆင်ထားသည် (7)
သတ်မှတ်ထားသောအခြေအနေမှာ "Ibaraki စီရင်စုဒါဟာ "ဖြစ်ပါတယ်။